Iran: Miteraka Fisondrotam-bidim-piainana Ny Fanapahana Ny Fanampiana Ara-bola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2017 15:39 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 한국어, 繁體中文, 简体中文, Français, Italiano, македонски, Español, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Desambra 2010 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Nanoratra i Sabzlink fa nanomboka fitokonana tao amin'ny seranan-tsabo Bandar Abbas ao amin'ny faritra atsimon'i Iran ireo mpiasa.
Araka ny voalazan'ny MSNBC, “farafahakeliny niakatra avo efatra heny ny vidin'ny solika ary mihoatra ny avo roa heny ny vidin'ny mofo tamin'ny herinandro lasa hatramin'ny nampihenan'ny governemanta ny fanampiana ara-bola”.
Nilaza ireo mpitarika ny mpanohitra Mir Hossein Mousavi sy Mehdi Karroubi tamin'ny Alarobia fa miandry ny toekarena “ny hoavy maizina” satria tsy mihaino ireo mpahay toekarena ny governemanta (mpahay toekarena iray no voasambotra rehefa avy niresaka tamin'ny media vahiny).
Naneho hevitra ihany koa ireo bilaogera Iraniana mikasika izay nantsoin'ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad hoe “fandidiana lehibe indrindra” eo amin'ny toekarena Iran tao anatin'ny 50 taona.
Bilaogera maromaro, anisan'izany ilay bilaogera mpomba an'i Ahmadinejad, no naneho ny ahiahiany lalina mikasika ny fiantraikan'ny fampihenana ny fanampiana ara-bola.
Azarmehr nanoratra hoe:
Tamin'ny Asabotsy, nanambara fanesorana ny fanampiana izay nitazona ny vidin-javatra ho ambany teo amin'ny toekarena ao Iran ihany i Ahmadinejad nony farany. Mba hanamaivanana ny fanaintainana aterak'ity fanapahan-kevitra ity, handray fanampiana ara-bola kely amin'ny kaonty bankiny ny Iraniana tsirairay. Tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny fahitalavitra, niresaka momba io vola io ho vola miafin'ny Imam [mino ny Miozolomana Shiita fa Mahdi no Imam miafina] i Ahmadinejad, izay mahatoky amin'ny toetrany mesianika. Fampindramam-bola amin'ny taha zana-bola aotra ho an'ny vahoakan'i Iran no omen'ny Tompon'ny Vanim-potoana rehetra, Imam Mehdi, izay hiverina sy hanafoana ny kolikoly sy ny tsy rariny amin'ny tany. Hatraiza ny faharetan'io vola fanampiana io, ary raha miteraka fisondrotam-bidim-piainana na fisondrotam-bidim-piainana tafahoatra ny fanomezana vola, tsy izay no tiako resahana akory, na dia izany aza.
Azarak nilaza hoe:
Hiaina nofy ratsy ny 70 isanjaton'ny fianakaviana Iraniana miaina ao anatin'ny fahantrana ary tsy ho afaka hividy akanjo sy kiraro vaovao ho an'ny zanak'izy ireo amin'ny Taombaovao Iraniana [afaka telo volana] … ireo izay manakiana ity drafitrasa ara-toekarena ity dia hosamborina. .. Hoesorina amin'ny toerany i Ahmadinejad saingy hamela firenena ho rava.
Tsenan'ny legioma Sabzeh Meidun ao Isfahan, Iran. Sary avy amin'i Alieh Saadat © Demotix (4 Aogositra 2009)
FreedomVoice nanoratra fa ny saranga antonony sy ny mahantra no tena itambesarany indrindra ary ny fomba tsara indrindra hanoherana dia ny fitokonana faobe.
Nanakiana ny drafitr'asa ara-toekarena ihany koa i Masaeb Ahmadinejad, bilaogera mpomba an'i Ahmadinejad. Mihevitra izy fa hiteraka korontana ny fanapahana ny fanampiana ara-bola, ary nanoratra fa nandritra ny fitondrana teo aloha, niteraka fitroarana ny fisondrotam-bidim-piainana. Nilaza koa izy fa avy amin'ny saranga antonony ny ankamaroan'ireo mpanohana an'i Ahmadinejad, ka mety hanimba ny endriky ny filoha ny toe-draharaha ara- toekarena misy.
Sabzlink kosa nanoratra fa nanomboka nanao fitokonana (sary etsy ambony) ao amin'ny seranan-tsambo Bandar Abbas any atsimon'i Iran ny mpiasa. Milaza ireo mpitokona fa ambony noho ny vola azon'izy ireo avy amin'ny mpanjifa ny vidin'ny lasantsy.